Ka daa qalabyada adigoo adeegsanaya qoraalka Windows-ka > Vielhuber David
Ka daa qalabyada adigoo adeegsanaya qoraalka Windows-ka10
Si aad u keydiso korontada ama aad u yareyso kormeerkaaga paranoia, waxaa lagugula talinayaa inaad gebi ahaanba ka jarto qalabka aan isticmaalin kombiyuutarkaaga. Qalabka sida sanduuqyada dhawaaqa ama kamaradaha webka waa la hawl gelin karaa / la jari karaa habka caadiga ah iyadoo la adeegsanayo maareeyaha qalabka. Waxa oo dhan sidoo kale waxay ku shaqeeyaan qoraal ahaan. Habka caadiga ah ee tan loo sameeyo wuxuu ahaan jiray mid xeel dheer . Windows 10 hadda waxay bixisaa hab aad ugu habboon oo tan lagu sameeyo iyada oo loo marayo PowerShell .
Marka hore waxaad go'aamisaa magaca ama Aqoonsiga qalabka adoo adeegsanaya maareeyaha qalabka (midig u guji qalabka kala duwan> Faahfaahinta> Tilmaanta qalabka / Aqoonsiga Qalabka). Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa amarka PowerShell Get-PnpDevice -PresentOnly . Hadda waxaad abuureysaa qoraalka soo socda ee PowerShell:
Qoraalku wuxuu si otomaatig ah u muujinayaa wadahadalka UAC maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay xuquuqda maamulka oo hadda loogu yeeri karo sida soo socota:
XXX waxay u taagan tahay magaca ama Aqoonsiga qalabka, YYY qiimayaasha suuro galiya ama curyaamiya (nooca sidoo kale waa laga tagi karaa, markaa xaaladda hadda jirta waa la diidey kiis kasta). Si aad ugu wacdo wax walba oo ku habboon adoo adeegsanaya xiriiriye, si fudud u samee sida soo socota:
Autostart adoo adeegsanaya qorshaynta hawsha (ikhtiyaarrada ah "fulinta oo ka madax banaan koontaroolka koontada isticmaalaha" iyo "lehna mudnaanta ugu sareysa") ama xakamaynta khariidadaha kulkudud ayaa si fudud suurtagal ugu ah qalab sida daciifnimo , tusaale ahaan.